San Htun's Diary: Batam သွား တောလား
ညက်မှန်က အမြဲတပ်တာ..လှတယ်ပြောလို့အင်ဒိုမုန့် တွေ ကျွှေးလိုက်မယ်..အားမနာနဲ့ ...အဝစား..
ရင်းရင်းနှီးနှီး မြင်ဖူးနေမှာပေါ့..ကိုယ့်အမျိူးကိုယ် မမှတ်မိတော့ဘူးလား...:P
ပျော်စရာကြီးပဲ ..အားကျတယ် စန်းထွန်းရေ..:)
ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတာကနေ အိန်ဂျယ်လှိုင် လာလည်တယ်ဝေ့..warmingly welcome !
ကဲ စန်းထွန်းရေ ပိုစ့်တွေဖတ်ပြီးအားတွေကကျ .မဒိုးကန်ကနဂိုကမှခြေထောက်ဗွေပါတယ်နော်
ခရီးသွားလို့ရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင် ...း)
မဒိုးကန် တူများနဲ့ဆိုင်ဘူးနော်..:P
ကိုအောင် လာလည်တာ ဝဲတွေ ကမ်း အဲလေ welcome..ဟိ..ဟိ..
ဘာလို့ ဒီပို့ စ်မတွေ့ မိတာပါလိမ့်။ ကိုယ့်စီမှာ မတက်ဘူးလားမသိ။ ဖတ်လို့ ကောင်းလွန်း လို့ ဆက်ဖတ်ချင်နေတုန်း။
Now Myanmar citizen do not require Indo visa. We just came back from Bintan.
အိမ်း ကောင်းလေစွ..ကောင်းလေစွ..ဗီဇာဖိုး သက်သာသွားတာပေါ့